शब्द-सिर्जना : चियाको खैरो जालो - मातृका पोखरेल
रेडियोमा वि.वि.सि. नेपाली सेवाको समाचार आउनै लागेको थियो । सांसद् हिरादत्तलाई आजको कुनै पनि समाचार सुन्ने मौका मिलेको थिएन । विहानदेखि बेलुकासम्म तीन चार ठाउँहरूमा भेटघाट र मिटिङहरू भ्याएर बेलुका एकजना साथीसँग रेष्टुरेन्ट छिरेका उनी ढिलै गरेर आफ्नो डेरामा आइपुगेका थिए । बाटोमा आफ्ना सांसद साथीहरूको लगातार मोबाइलमा घण्टी बजिरहेको थियो । रेष्टुरेन्टमा उनले निकै पिएका थिए । साथीहरूले पिउने कुरा थाहा पाइहाल्छन् कि भन्ने डरले उनले मोवाइल रिसिभ गरेनन् ।
“तर आज किन धेरै साथीहरूको फोन आयो” हिरादत्तभित्र प्रश्न नउब्जेको होइन । घटनाको कुनै अन्दाज सम्म गरेनन् उनले ।
“आज धेरै पिएर आउनु भयो कि के हो ?” खानाको थालीमा तरकारी राख्दै गर्दा पारूले हिरादत्तलाई छासिन ।
“अरू दिनको भन्दा आज अलिक बढ्तै भएछ ।” स्वीकारोक्तिमै बोले उनी ।
पारुले किचेन टेबुलमाथि खाना राखि दिइन् । हिरादत्तले खानाको थाली सार्दै रेडियोलाई आफू नजिकै ल्याएर राखे ।
खाना खान सुरु गर्दागर्दै उता वि.वि.सि नेपाली सेवाले पनि समाचार भन्न सुरु ग¥यो । पारु पनि खानाको थाली लिएर टेबुलको एकाछेउमा बसिन् ।
प्रमुख समाचारमैं रेडियोले भन्यो । “नेपालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएको छ ।” अचानक दुवै जनाले मुखमा पुग्नै लागेको भातको गाँसलाई टक्क रोके र एकले अर्काेलाई हेरे ।
रेडियोले पुरा समाचार भन्न बाँकी नै थियो ।
एकाएक दुवैको अनुहार ठूलो आँधीबेहरी आउन लागेको समय जस्ते कालो अँध्यारो भयो । तर दुबै जना मौन बसे । केही बोलेनन् ।
“बाबु र नानीले खाना खाइसके ?”
मौनता तोड्न खोजे हिरादत्तले ।
“अँ ! खाएर पनि सुतिसके ।” संक्षिप्त उत्तरमै टार्न खोजिन पारुले ।
“भोलि त विदा हो नि उनिहरूको !”
हिरादत्तको स्वर मलिनो थियो ।
“विदा त हो, आज स्कूलले बीस हजारको बील पठाएको छ ।” हिरादत्तको अनुहारतिर नहेरिकन बोलिन पारु ।
“ओ हो ! बीस हजार !” हिरादत्त झस्किए ।
“पहिले पनि त्यस्तै त आउन्थ्यो नि !
त्यस्तो महंगो स्कूल छ ।” पारुले थपिन् ।
“मैले त तिमीलाई भनेकै थिए नि ! अलिक साधारण स्कूलमा राखौँ है भनेर !” हिरादत्तको स्वरमा सानो आक्रोस झल्कन्थ्यो ।
“हामी बसेको घर मालिक एउटा सामान्य खरदार हो । उसले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही स्कूलमा राखेको छ । त्यति पनि नसक्ने हो भने यत्रो नेता हुँ भनेर किन हिँड्नु प¥यो !” पारुले पनि एउटा सानो वाणको झटारो हानिन् ।
हिरादत्तले अरू प्रतिक्रिया दिन आवश्यक ठानेन् । खानाको थालीबाट आँखा उठाएर पारुतिर हेर्न आवश्यक पनि ठानेनन् ।
उनीहरू पहिलेपहिले कहिलेकाहीँ राजनैतिक छलफल पनि गर्थे । संसदमा भइरहेको अन्र्तसंघषबारे पनि कहिलेकाहीं कुराकानी गर्थे । तर उनीहरूले कुनै राजनैतिक छलफल गरेनन् आज ।
हिरादत्त र पारु सुत्ने कोठामा पुगे । आजै धोएका लुगाहरू असरल्ल ओछ्यानभरी छरिएका थिए । पट्याउने जांगर त पलाएको थिएन, तर काम साँच्न मन लागेन पारुलाई । ओछ्यानका लुगाहरू सोहोरेर भुइँमा थुपारी र लोग्नेलाई सुत्ने ठाउँ तयार पारी दिई ।
पार्टीमा पिएको ‘ह्याङओभर’ हिरादत्तमा अझै बाँकी नै थियो । लुगा नफुकालिकन उनी डङ्ग्रङ्ग ओछ्यानमा पालिए ।
“अब के गर्ने होला भनेर तपाईंलाई त कुनै चिन्तै छैन जस्तो छ । मलाई त कस्तो छट्पटी भइसक्यो ।” पारुले कपडा पट्याउँदै कुरा निकालिन् ।
“अब गाउँ जाने, काम गर्ने बस्ने !” सन्त्रास भरिएको मनबाट हिरादत्तले खरो कुरा गरे ।
“जानु भो गाउँ ! गाउँमा अचेल तपाईंलाई मान्छेहरूले कस्तो गाली गर्छन् । तपाईंले त के सुन्नुभाको छ र ! मैले पो सुनेकी छु त !” गाउँ जाने कुराले पारु त्रस्त थिईन् ।
“चुनाव जितेर गएपछि गाउँमा विकास त कता हो कता भत्ता मात्र खाएर बसे । गाउ पनि फर्किएर आएनन् । यस्तै यस्ते कुरा गरेर चाहिँदोनचाहिँदो गाली गर्दा रहेछन् तपाईंलाई ।” यति भनिसकेर पारुले पुलुक्क फर्किएर हिरादत्तलाई हेरिन् ।
केही नबुझेर मात्र हामीलाई गाली गरेका हुन् ।” हिरादत्तले मलिनो अनुहार लगाउँदै जवाफ फर्काए ।
“मान्छेहरूले त्यो कुरो बुझ्नु प¥यो नि !” पारूले आफूभित्रको डरलाई अलिकति पखालीन् ।
“बुझाउन शिवाय हामीसँग अर्काे उपाय पनि त छैन नि ! हामी धेरैजसो सांसदहरू त एक प्रकारले जागिरे जस्ता मात्र थियौँ । सबै कुराको निर्णय त नेताहरूले मात्र गर्थे ।” हिरादत्तले नम्र स्वरमा पारूलाई प्रष्ट बनाउन खोजे ।
“आज म अलिक बढि नै थाकेको छु । म अब निदाउँछु ।” हिरादत्त भित्तातिर कोल्टे फर्किए ।
“चुनाव जित्न लिएको लाखौँ ऋण छ । परिवारमा नबेच भन्ने सल्लाह दिँदादिँदै पनि पैत्रिक अंसमा आएको बजारको परारमात्र बेचेको घडेरी चुनाव जित्नका लागि गाउँगाउँका मानिसहरूलाई उनीहरूले मागेजति गरिदिन्छु भनेर दिएको आश्वासन !’ उसको मानसपटलमा चलचित्रका दृश्यझैँ सवैकुरा एकाएक आउन थाले । जति सोच्दै जान्थ्यो, उसको हृदयभित्र आतङ्कको एउटा पहाड सिर्जना हुन्थ्यो ।
निद्रा आउने त कुनै छनकनै थिएन ।
पारुलाई थाहा थियो —हिरादत्तलाई बेलाबेलामा चिन्ता र निरासाले गाँज्यो भने सुत्ने बेलाबेलामा चिन्ता र निरासाले गाँज्यो भने सुत्ने बहाना गर्छन र ओछ्यानमा आँखा चिम्लेर पल्टी रहन्छन् ।
“किन बोल्दिनौ तिमी ? तिमीलाई निद्रा लागेको छैन जस्तो छ !” सांसद हिरादत्तले बिहान उज्यालो हुने बेलातिर आफूले केही थाहा नपाएझैँ गरेर पारुलाई सोधे ।
विहान चार बजिसकेको थियो । दुबैजना निदाएका थिएनन् । हिरादत्त र उनकी पत्नी पारु दुवै जनाले रातभरीनै निदाए जस्तो अभिनय गरिरहेका थिए ।
“होइन म निदाएर ब्युँझेकी हुँ ।” हिरादत्तकी पत्नी पारुले कुरा लुकाउँदै भनिन् ।
हिजो बेलुकाको समाचार दुवैले सुनेका थिए । तर दुवैले यो समाचारको बारेमा कुनै चर्चा गरेनन् । दुवैको मनमा आतङ्कको एउटा हुण्डरी चलिरहेको थियो ।
“तपाईं चाहिं निदाउनु भएको छैन कि के हो ?” भित्तातिर फर्केर पारुले हिरादत्तलाई सोधिन् ।
“म पनि निदाएरै ब्युँझेको हुँ ।” पारुले दिएजस्तै उत्तर दिए हिरादत्तले पनि ।
आफूहरू दुवै जनालाई खासै चिन्ता नभएको कुरा देखाउन खोजिरहेका थिए उनीहरू । तर हिजो वि.वि.सि.को समाचार पछि दुवै जनाको अनुहारमा आतङ्कको एउटा छायाँ दौडिरहेको थियो ।
उनीहरू उज्यालो हुने वित्तिकै ओछ्यानबाट उठे । घरमा एउटी काम गर्ने मान्छे थिइ शान्ता । शान्ता गाउकै केटी हो । ऊ चिया लिएर आई कोठामा ।
शान्ताले चियाका कपहरू टेबुलमा छाडेर गएको पनि निकै समय भइसकेको थियो । कप उठाउन आउदा मात्रै देखी उसले । उसले ल्याएको कपमा जस्ताको तस्तै थियो चिया । चियामा खैरो जालो तैरिरहेको थियो ।
माननीय हिरादत्त सोफाको एउटा छेउमा बसेर झ्यालबाट एक तमासले पूर्वतिर हेरिरहेका थिए । सोफाको अर्काे छेउमा बसेर सांसद् पत्नी पारु पश्चिमतिर फर्किरहेकी थिइन् ।
“मालिक्नी साहेब चिया त चिसो भइ सकेछ नि ! फेरि तताएर ल्याइदिऊ कि !” शान्ताले अचम्म मान्दै भनी ।
“होइन होइन तताउनु पर्दैन । धेरै चिसो भइसकेको छैन ।” पारुको बोली थर्थराइरहेको थियो ।
“अँ ! पर्दैन पर्दैन !” हिरादत्तले पनि थपे ।
“आज के भएछ दुवै जनालाई !” मनमनै सोच्दै शान्ता भान्सातिर गई ।
शान्ता बाहिर निस्कने बित्तिकै हिरादत्तले चियाको कप लगेर ओठमा टाँसे ।
“ओहो ! चिया त बरफ जस्तै चिसो भइसकेको रहेछ ।” ओठ विगार्दै प्रतिकृया दिए हिरादत्तले ।
चियाको कप समातेर ओठमै पु¥याउन लागेकी पारुले हिरादत्ततिर फर्र्किएर हेरिन् । हिरादत्तको ओठमा चियाको खैरो जालो तुन्दु्रङ्ग झुण्डिरहेको थियो ।
ताप्ली—४, थामखर्क, उदयपुर
Posted by शब्द-यात्रा at 11:28 PM